3 sababood oo sawirku ugu qiimeeyo kun eray naqshad | Abuurista khadka tooska ah
Ayaa yiri "Sawirku wuxuu u dhigmaa kun eray»Wuu ku saxsanaa xaqiiqduna waxay tahay in ereyadan ay aad ugu habboon yihiin internetka.
Sawirada ka muuqda websaydhkaaga ayaa go'aamiya sida booqdayaashu u arkaan ganacsi iyo summadSidaa darteed haddii aad leedahay degel oo aad rabto martidaada inay cunaan waxyaabaha ku jira ama ay qaadaan tallaabo gaar ah, waa lagama maarmaan in la sawiro sawirka midigta ka socda.
1 Waxaan soo bandhigeynaa seddex sababood oo sawirku u yahay wax walba oo internetka ah
1.1 Dadku waxay ku hagaan waxa ay u arkaan dabiiciyan
1.2 Dad badan wax ma akhriyaan, ee si dhakhso ah ayey iskaan u qaadaan
1.3 Dadku waxay rabaan inay helaan macluumaad dadaal la'aan
2 Sawirka midigta ku yaal ayaa soo jiidan kara dadka
Waxaan soo bandhigeynaa seddex sababood oo sawirku u yahay wax walba oo internetka ah
Dadku waxay ku hagaan waxa ay u arkaan dabiiciyan
Markuu booqde ku yimaado websaydhkaaga, illaa ay aragga ka naafoobaan mooyee, aragtidooda ugu horreysa ayaa lagu dhisi doonaa waxa ay ku arkaan jaleecada hore. Haddii websaydhkaagu qasan yahay oo uu leeyahay sawirro aan waxba ku soo kordhinayn sheekada aad sheegayso, booqashooyinkaagu way wareeri doonaan oo malaha ma sii joogi doonaan.
Dhibaatadu waxay tahay in bogagga oo dhami aysan u baahnayn sawirro gaar ahaana ay ku fiicnaan lahaayeen sawirada asalka ah kuwaas oo si miyir leh loo abuuray si ay u taageeraan waxyaabaha ku jira bog kasta.
Dad badan wax ma akhriyaan, ee si dhakhso ah ayey iskaan u qaadaan
Doodda ku saabsan inta qof ee sida dhabta ah u akhriya bogagga shabakadda wali lama xallin, maadaama dadka qaar ay leeyihiin cidna ma akhriyo halka dadka kale ay leeyihiin badanaa waa la akhriyaa. Runta waxay taalaa isgoyska habboonaanta iyo xiisaha waana inay dadku wax akhriyaan, laakiin waa markay run ahaantii xiiseeyaan nuxurka.
Haddii kale waxay baarayaan sadarrada si ay u akhriyaan ereyada muhiimka ah oo haddii aysan helin waxay raadinayaan, waxay ka tagayaan boggaaga.
Dadku waxay rabaan inay helaan macluumaad dadaal la'aan
Tijaabooyin la sameeyay ayaa muujiyay in dad badan ay qoraallada ku wadaagaan baraha bulshada iyaga oo aan xitaa aqrin.
Tan waxaa lagu tijaabiyay 2014, goorta NPR wuxuu qof walba nacas ka dhigay bishii Abriil isagoo daabacay maqaal cinwaankiisu yahay, muxuu Mareykanku wax badan u akhriyi waayey? Runtii ma jirin qoraal, laakiin cutub ayaa loo jaray in dadka lagu farayo inay jeclaadaan qoraalka Facebook laakiin aan laga faalloon, si loo arko inta qof ee runta akhriya macluumaadka.
Xaqiiqdii, dadku waxay wadaageen boostada iyagoo ka jawaabaya cinwaanka iyagoon xitaa riixin cinwaanka, maadaama ay u maleeyeen inay ka faaloodaan sheeko ku saabsan akhris-qoris la'aanta iyo dadka oo lumiyay xiisihii buugaagta.
Daraasaddan ku saabsan shabakadaha bulshada ayaa go'aamisay in 59% warbaahinta bulshada aysan gujinin xiriiriyeyaasha, oo muujineysa in xiriiriyeyaasha la wadaago iyadoon la aqrin.
Sida muuqata, aqrinta maqaal waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal ka badan inta dad badani ay diyaar u yihiin inay bixiyaan oo wax la wadaagaan aqrin la'aan, taasi waa sababta sawirradu muhiimad weyn ugu leeyihiin mashruuc kasta oo haddii dadku ay u guuraan waxyaabaha ku jira, sawiradaadu waxay noqon karaan sida kaliya ee lagu soo jiito dareenka macaamiishaada.
Sawirka midigta ku yaal ayaa soo jiidan kara dadka
Sawirka aan rasmiga aheyn ee la adeegsaday ayaa ka dhigaya booqdaha booqashada (si kooban) inuu arko haddii ay jiraan wax ku habboon bogga.
Sawir miyir qaba loo adeegsado in lagu gudbiyo farriin gaar ah waxay ka dhigi doontaa soo-booqdaha inuu duubo isagoo sugaya waxa ku jira bogga, taas oo ah, marka sawiradaadu gudbiyaan farriin habboon, booqdayaashu badanaa waxay siiyaan waqti ku filan oo ay ku sii akhriyaan mashruucaaga ama shaqadaada.
Taasina waa sawirka wanaagsan ee la qaabeeyey oo wax badan ka sheegaya astaanta, shaqada iyo macmiilka, tusaale ahaan, waxaad aqrinaysaa maqaal ka hadlaya nidaamyada amniga ee la shaqeeya barnaamijyada lagu rakibay taleefanka gacanta isla markaana sawirku si cad u muujinayo farriintan.
Sawirka, shaashadaha taleefanka iyo laptop-ka waxaa ku jira isla menus muuqaal ah, laakiin qaab ka duwan.
Cinwaanka maqaalka ayaa u dhigma sawirka iyo booqdaha ayaa isla markaaba ogaan doona inay ku sugan yihiin meesha saxda ah, maadaama martidu aysan had iyo jeer helin waqti ay ku akhriyaan waxyaabaha aad ka kooban tahay, sidaa darteed, sawiradaadu waa hantidaada ugu muhiimsan markay tahay qabashada iyo ilaalinta dareenka macaamil macquul ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » 3 sababood oo sawirku ugu qiimeeyo kun eray naqshad
Sida loogu ekeysiiyo saameyn xawaare leh Photoshop